पार्टीमा फलानो पक्षधर भन्ने होइन, एमाले पक्षधर भन्ने हो: विष्णु रिमाल (भिडिओ) :: सन्जिब बगाले :: Setopati
पार्टीमा फलानो पक्षधर भन्ने होइन, एमाले पक्षधर भन्ने हो: विष्णु रिमाल (भिडिओ)
'संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्नेहरूले नै संसदको हुर्मत लिएका छन्'
काठमाडौं, वैशाख ३
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्नेहरूले नै संसदको हुर्मत लिएको आरोप लगाएका छन्।
सेतोपाटीसँग भिडिओ कुराकानी गर्दै रिमालले संसद बैठकको पहिलो दिनमै अध्यादेश पेश गर्नु पर्नेमा त्यस्तो गर्न नदिइएको बताए। उनले सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएका अध्यादेश र विधेयकलाई सभामुखले अगाडि नबढाएको आरोप लगाए।
'संसद बैठक वक्तृत्वकला प्रतियोगिता जस्तो मात्रै देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीले त यो संसदले औचित्य भएन भन्नुभएकै हो,' उनले भने,'प्रतिनिधि सभाले परिणाम दिन सक्दैन भनेर नै प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नुभएको हो। सर्वोच्च अदालतले यसलाई खारेज गरिदिएको हो। जसले यो संसदको औचित्य छ भनेका छन् उनीहरूले पुष्टि गरे भयो नि।'
नेकपा हुँदै माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीबाट निकाल्ने काम गरेको भन्दै रिमालले अहिले मलाई निकाल्न खोजियो भनेर नेपालले भन्नु गलत रहेको बताए।
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर लैजाने काममा लाग्नु पर्नेमा नेपाल समानान्तर गतिविधिमा लागेको रिमालको आरोप छ।
'सर्वोच्चको आदेशपछि माधव नेपालले पेरिसडाँडामा छुट्टै बैठक गर्न लाग्नुभयो। त्यो काम नगर्नुस् भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ हो,' उनले भने,'प्रधानमन्त्रीले नगर्नुस् भनिसकेपछि पनि उल्टो-उल्टो काम गरेपछि गरिएका प्रतिक्रियामात्रै हुन् जस्तो लाग्छ मलाई।'
रिमालसँग सरकार गठनको आगामी प्रक्रिया, राजपासँगको सहकार्य र एमालेभित्रको विवादलगायतका विषयमा भिडिओ कुराकानी गरेका छौं।
यस कुराकानीका मुख्य अंश:
-फागुन २८ गतेको बैठकमा सबैलाई डाकिएको हो। त्यो दिनको निर्णय बहुमतले गरेको हो। प्रधानमन्त्रीले पुनर्स्थापित एमालेको बैठक डाकेर थप निर्णय गर्नु परेको थियो। संगठनलाई पुनर्गठन गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाउनुभएको हो।
-माधव नेपाललगायत न एमाले हुन चाहनुभयो, न माओवादी भएर जान सक्नुभयो। त्यो द्विविधामा उहाँहरू पर्नुभयो। त्यही भएर फागुन २८ गते हामी नभएको बेलामा बैठक गरेर निर्णय गरियो भन्ने उहाँहरूको तर्क हो। उहाँहरूले गरेको तर्कमा खासै धरातल छैन।
-अब फलानो पक्षधर भनेर आउने होइन, एमाले भनेर आउने हो। गुटबन्दी भनेकै यही हो। बैठकका लागि सबैलाई फोन गरिएको छ, सबैलाई एसएमएस गरिएको छ। आफ्नो पार्टीमा त आफैं जाने हो नि! पत्रकारलाई थाहा हुने अनि उहाँहरूलाई थाहा नहुने भन्ने हुन्छ। ल मान्नुस्, प्रधानमन्त्री ओलीले नडाकेको भए मेरो पार्टीमा मलाई नडाक्न पाइन्छ भनेर आउन सकिन्थेन? पेरिसडाँडामा लुरूलुरू जान मिल्ने आफ्नो पार्टीमा आउन नमिल्ने भन्ने हुन्छ?
-विधानको व्यवस्थाअनुसार नै महाधिवशेन आयोजक कमिटी गठन गरिएको हो। उहाँहरू आफैंले विधि विधानको कुरा गर्नुहुन्छ। यो जम्मै कुरा बैठकमा आएर गर्न सकिन्छ। एमालेमा अहिले केपी ओली पक्षधर र माधव नेपाल पक्षधर छैन, सबै एमाले पक्षधर हो। एमालेको एउटै कमिटी छ। कमिटी बनाउन पार्टीको निर्णय चाहिन्छ। त्यस्तो निर्णयको कुनै वैधता रहँदैन। एमालेको एउटै कमिटी छ, एमाले छोडेर कोही जान्छ भने नजानुस् भन्ने हो।
-अहिले ४ जना नेताहरूलाई स्पष्टिकरण र स्पष्टिकरणपछि निलम्बन गरिएको छ। थप क्षति हुने काम नेताहरूले गर्नु हुँदैन। क्षति पुग्ने काम भएन भने कारबाही हुँदैन। कारबाही भोग्दै नेताहरू जानुस्, त्यसपछि पार्टीले क्षति भोगोस् भन्ने मैले चाहेको छैन।
-अहिलेको स्थितिमा सरकारलाई बहुमतको समर्थन छ। यो सरकार अल्पमतमा छैन। विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था छैन। माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिँदासम्म कुनै दौडधुप गर्नु पर्दैन। फिर्ता लिएपछिको अवस्थाबारे त्यही बेलामा छलफल हुन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई कतै बहुमत खण्डित छ कि भनेर विश्वासको मत लिन पनि सकिन्छ। त्यो बेलामा विश्वासको मत प्राप्त भएन भने संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्छ।
-राजपासँग मिलेर सरकार बनाउने विषयमा छलफल भएको छैन। उहाँहरूले उठाएको मागको विषयमा मात्रै छलफल भएको छ। दुबैतिरका कार्यदलका बीचमा छलफल भएको छ। मलाई लाग्छ, राजपाले पनि यस विषयमा बोलेको छैन। राजपाका मागबारे प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्छ। उसका मागलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर छलफल भइरहेको छ भन्ने मेरो अन्दाज हो।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख ३, २०७८, २०:५६:००
समयमा काम नसके ठेकेदारको भुक्तानी रोक्ने विराटनगर महानगरको चेतावनी
जसपाका नयाँ मन्त्रीले लिए सपथ, लगत्तै सम्हाले कार्यभार
धनगढीको नगर सभामा मेयर-उपमेयरबीच चर्काचर्की
उपत्यकाका तीन जिल्लाबाट नै प्रदेश प्रहरी हटाउने कुरा संविधान प्रतिकुल छः सांसद शर्मा